Hargeysa(Gebogebonews)-Warbaahinta caanka ah ee Reuters ayaa sheegtay in aanay masuuliyiinta dawladda Imaaraadka Carabtu ka jawaabin farriimo ay u direen oo ku saabsan mawqifkooda hadalkii madaxweynaha Somaliland Dorraad ka sheegay magaalada Berbera.
Hadalka madaxweynaha Somaliland ayaa loo qaatay in gabi ahaanba Somaliland ka laabatay heshiiska Militari ee ay dawladda Imaaraadka kula jirtay markii madaxweynuhu sheegay in madaarka Berbera lagu soo celiyay mid rayid ah laakiin, madaxweynuhu shalay ayuu hadalkiisa saxay oo tilmaamay in uu noqon doono garoon Militariga iyo diyaaradaha rayidka ahi wada isticmaali doonaan.
Warbaahinta Caalamka ayaa si weyn uga faallootay arrintan waxaana ka mid ah Reuters oo soo qaadatay hadalka madaxweynaha, islamarkaana la xidhiidhay dawladda Imaaraadka laakiin, wax jawaab ah ka wayday madaxda Imaaraadka Carabta.
Reuters ayaa intaas ku dartay in dawladda Imaaraadku hoos u dhigtay danaynteeda dagaalka Yemen iyo arrimaha militari ee arrintan la xidhiidha.
Somaliland waxa hadal hayn badan abuuray in madaxweynuhu shaaciyay isbedelka ku yimid heshiiska iyada oo sharci darro lagu tilmaamay in heshiisyada baarlamaanku ansixiyeen madaxweynuhu ka laabto ama wax ka bedelo.